ड्रेसमा अलि ध्यान पुर्याउने की प्रियंका जी ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
ड्रेसमा अलि ध्यान पुर्याउने की प्रियंका जी ?
फिल्मी फण्डा । अन्तराष्ट्रिय फिल्म फेस्टिवलमा विभिन्न देशका सेलिब्रेटीहरुको जमघट हुने गर्दछ । विश्वमञ्चमा सेलिब्रेटिका लागी सर्वाधिक चासोको रुपमा हेरिएको फिल्म फेष्टिभल हो, ‘कान्स फिल्म फेस्टिवल’। फेस्टिवलमा सेलिब्रेटीले गर्ने गतिविधि चासोको रुपमा हेरिन्छ । उनीहरुले कस्तो ड्रेस लगाउछन् ? कसको जोडी को बनेर पुग्छन ? यस्ता जिज्ञासाले गसिपको रुप लिने गर्छ । कान्सको ७२ औ संस्करण फ्रान्समा सुरु भैसकेको छ । जहाँ विश्वभरका सेलिब्रेटीले आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेका छन् । फेस्टिभलको ७२ औ संस्करणमा आइपुग्दा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै नायिका प्रियंका कार्की उपस्थित भएकी छिन्।
समय अनुसार आफुलाई परिवर्तन गर्दै आएकी यी बोल्ड नायिकाले मे २० तारिकका दिन अर्थात् सोमबार रेड कार्पेटमा सहभागिता जनाइन् । केहि समय अगाडी नै आयोजकबाट निम्तो आएपछि प्रियंकाले आफ्नो ड्रेस लगायतका विभिन्न तयारी थालेकी थिइन् । प्रियंकाले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदा खुशी रहेको र आफ्नो उपस्थितिलाई सार्थक बनाउने प्रयास रहने बताएकी थिइन् । कान्समा सहभागि भएको फोटोहरु प्रियंकाले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिरहेकी छिन् । फेस्टिवलमा उनी विभिन्न सिक्वेन्समा विभिन्न ड्रेसमा प्रस्तुत भइन् ।
तर, प्रियंकाले डे«स छान्दा उतिसाह्रो ध्यान नदिएको देखियो । उनले फेस्टिबलमा लगाएको एक ड्रेस र नायिका नम्रता श्रेष्ठले फिल्म ‘प्रसाद’को प्रिमियर शोमा लगाएको ड्रेस एकै खालको रहेको छ । विश्वमञ्चमा सहभागिता हुँदा प्रियंकाले लगाएको ड्रेस छान्दा डिजाइनरले ध्यान नदिएको हुन् कि प्रियंकाले नै हेक्का नराखेकी हुन् ?